Home » Vaovao momba ny zon'olombelona » Fanondranana olona an-tsokosoko ao amin'ny magazay miisa 7 iraika ambin'ny folo sy Circle K?
Ireo niharam-boina ny fanondranana olona an-tsokosoko Afaka miseho amin'ny vondrom-piarahamonina na toerana misy na aiza na aiza, fijanonan'ny kamio, foibe fitsangantsanganana ary tobin-tsolika akaikin'ny lalambe, fivarotana mety 24 ora toa 7 Eleven sy Circle K dia mazàna mahita matetika ny fampiasan'ny mpivarotra sy ny tra-boina azy ireo. Ny fiasana mandritra ny fotoana maharitra, ny trano fidiovana ho an'ny daholobe, ary ny fahazoana miditra mora foana dia mampitombo ny fiheverana fa afaka manampy ireo iharan'ny fanondranana olona ny fivarotana mora.
NACS dia niara-niasa tao an-tokotaninao mba handray anjara lehibe amin'ny famaranana ny fanondranana olona any Etazonia. Ao an-tokotaninay Fivarotana manararaotra miady amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko (CSAT) fandaharana dia manome fitaovana sy fanabeazana manokana momba ny fomba hahafantarana sy hitaterana ny fanondranana olona an-tsokosoko. Fanentanana ny besinimaro momba ny fanondranana olona an-tsokosoko ary ampitao amin'ny mpanjifa fa miahy ireo izay tena mila izany indrindra ny indostria.
Nanazava ny NACS: Feon'ny fianakavianay sy ny indostrianay izahay tao amin'ny Capitol Hill. Izahay dia miaro tsy an-kijanona an'ireo mpikambana ao amin'ny lalàna sy ny lalàna manimba izay mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny farany ambany.
Convenience Stores Against Trafficking (CSAT) dia programa tsy mitady tombombarotra ARA-BACKYARD, manararaotra ny indostrian'ny indostria sy solika mba hanana anjara toerana lehibe amin'ny ady amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko. CSAT dia mampita ny magazay amin'ny alàlan'ny fanofanana ho an'ny mpiasa hahafantarana ny fanondranana olona an-tsokosoko ary manome fitaovana hapetaka amin'ny magazay.
Mpiara-miasa amin'ny CSAT miaraka amin'ireo mpivarotra enta-mavesatra, mpivarotra solika, fikambanam-panjakana ary mpamatsy indostrialy any amin'ny fanjakana 40 mahery, misolo toerana efa ho 13,000.
Fivarotana manararaotra miady amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko (CSAT) ary ny Ready Training Online (RTO) dia niara-niasa tamin'ny famoahana programa maimaimpoana sy feno izay misy ny maodelin'ny fanentanana momba ny fanondranana olona. Maherifon'ny vondrom-piarahamonina: Mampijanona ny fanondranana olona an-tsokosoko ny magazay C. Ny maodelin'ny e-fianarana dia natao hampianarana ny mpiasa ny fomba hamantarana ireo famantarana ny fanondranana olona an-tsokosoko sy ny fomba hamaliana rehefa ahiahiana ny fanondranana olona an-tsokosoko. Ny fiofanana dia dingana lehibe iray hanovana ny fahatsiarovan-tena ho lasa hetsika ary hanovana ny tena fahasamihafana eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny Ready Training Online, amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny In Our Backyard, dia manome toky ny fanolorantenany hanampy amin'ny famaranana ny fanondranana olona an-tsokosoko